Markab Weyn oo Ku Caarin lahaa Dekadda Muqdisho Ayaa Si Dirqi Ah Lagu Badbaadiyay.
Thursday March 30, 2017 - 09:38:42 in Wararka by
Ganacsatada wax kalasoo dega dekadda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya dayacaad ku timaad hantidooda marka ay maraakiibta ganacsiga waaweyn kusoo xiranayso dekadda caalamiga ah.
Markabkii 2-aad oo dekadda kusoo xirtay ayaa ku sigtay in uu quuso kadib markii uu waayay Taagag tayo leh oo dhanka baroosinka usoo jiida.
Mid kamida ganacsatada waaweyn ee dekadda Muqdisho ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyay in xalay saqdii dhexe labadbaadiyay markab weyn oo boqolaal Konteenar siday kaasi oo sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay qarka usaarnaa in uu caariyo.
Ganacsatada ayaa shirkadda Turkiga Albeyrak ku eedeeyay in aysan wax dayactir ah ku sameyn dekadda gaar ahaan gunta badda oo ah meesha ay baroosimaha soo dhigtaan maraakiibta waaweyn ee sida wax ka badan 500 Konteernar.
Arrinta layaabka leh ayaa ah in dekadda caalamiga Muqdisho aysan awoodin martigelinta maraakiibta xamuulka ee Konteenarrada sida.
Bilo ka hor markab urarnaa ganacsata Soomaaliyeed ayaa ku dagay xeebta dekadda Muqdisho, lacago malaayiin dollar ah ayaa sanad walba laga qaadaa ganacsatada Soomaaliyeed lacagtaas oo ay kala qeybsadaan madaxtooyada Villa Somalia iyo dowladda Turkiga.
Shirkadda Albeyrak ayaa laba sanadood ka hor markii ay la wareegaysay Marsada Muqdisho waxay ballan qaaday in ay keeni doonto qalab casri ah sida taagag balse balanqaadkaasi ayaa beenoobay.